Mmiri Factory, Suppliers - China Spring Manufacturers
OEM ODM maka usoro oge opupu ihe ubi niile
1. Jikwaa ngagharị nke igwe, dị ka mmiri valvụ n'ime injin combustion nke ime, mmiri njikwa na ipigide, wdg. ◆ 2. Nwee mmetụ dị mma na ike mmetụta, dị ka mmiri na -echekwa n'okpuru ụgbọ ala na ụgbọ oloko ụgbọ ala, mmiri na -amịkọrọ mmiri, wdg ◆ 3. Chekwaa na ike nrụpụta dị ka ike, dị ka oge elekere, isi iyi na ngwa agha, wdg ◆ 4. Eji ya mee ihe dị ka ihe na -amanye ike, dị ka ngwaọrụ ịmanye ike, oge opupu ihe ubi, wdg. ka deformation bụ c ...
Mmiri bụ akụkụ igwe na -eji elastic na -arụ ọrụ. Akụkụ ndị e ji ihe na -agbanwe agbanwe na -emebi n'okpuru ihe ike nke mpụga, wee laghachi n'ọnọdụ mbụ mgbe iwepụsịrị ike mpụga. A makwaara ya dị ka “mmiri”. A na -emekarị nke nchara mmiri. Ụdị isi iyi dị mgbagwoju anya na iche iche. Dị ka udi, ha tumadi na-agụnye eriri igwe spring, akwụkwọ mpịakọta spring, efere spring, pụrụ iche ekara mmiri, wdg Dị ka ihe dị mkpa akụrụngwa na ulo oru usoro, spri ...
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Ihe nkedo, Ọnwụ nkedo Magnesium, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Aluminum CNC Machined Parts, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Mmiri Efere, Ngwaahịa niile